သင်၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အသိမိတ်ဆွေများအတွက်ခရစ်စမတ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများဥပမာ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ခရစ်စမတ်သည်ယခုနှစ်၏အပျော်ရွှင်ဆုံးနှင့်အပျော်ရွှင်ဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်အသိအကျွမ်းများနှင့်အတူအချိန်ကုန်ခံသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင်လက်ဆောင်များပေးအပ်ခြင်းသို့မဟုတ် Merry Christmas ကိုပေးရခြင်းမှာအလွန်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အချို့လူများကအထူး၊ မတူညီသောသို့မဟုတ်ထူးခြားသောနည်းဖြင့်လုပ်ချင်သောအရာ။ ဒါကြောင့်မင်းကိုမင်းကိုခေါ်လာချင်တယ် ဥပမာ ခရစ်စမတ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားသူတို့ကိုသုံးနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကမှုတ်သွင်းနိုင်တယ်။
ခရစ်စမတ်မှာလူတွေအားလုံးကိုသူတို့ဘာတွေပေးရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာအကြောင်းအရာ၊ သို့သော်အနည်းငယ်သောသူတို့သည်စဉ်းစားရန်ရပ်တန့်ပါပြီ ပျော်ရွှင်စရာခရစ်စမတ်ဘယ်လိုပေးရမလဲ ကြွင်းသောအရာနှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက်။ လူအများစုကပြောရန်ရွေးချယ်ကြသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ အချို့ကလက်ဆောင်အရောင်းဆိုင်များတွင် ၀ ယ်ထားသောအက္ခရာများကိုပေးသည်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိသော virtual ကဒ်များကိုပို့ကြသည်။
ကဒ်ဝယ်ခြင်းပြproblemနာကသင်မလုပ်လျှင်ဖြစ်သည် ငါတို့ကိုယ်ပိုင်စကားနှင့်ဖြည့်စွက်ဒါဟာဘာမှမပေးခြင်းသည်လက်တွေ့နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ဆောင်ကိုသာပေးအပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါသည်။ အင်တာနက်မှ virtual ကဒ်များသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်သည်။ ၎င်းတို့ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သူတို့ကသာမန်အသေးစိတ်အချက်အလက်အနည်းငယ်မှဖြစ်သော်လည်းအံ့သြစရာတော့မရှိပါ။
တစ်စုံတစ် ဦး အားအံ့အားသင့်စေသောအခါကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိနေသည့်အကောင်းဆုံးအရာများကိုအမြဲမေးမြန်းလေ့ရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းပုံနမူနာများကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ဘယ်ဟာကိုသူတို့ရေးထားတယ်ဆိုတာအတိအကျမကူးသင့်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့လှုံ့ဆော်မှုရယူဖို့ (သို့) လှပတဲ့စကားလုံးတွေကိုရောစပ်ဖို့အားသာချက်ယူပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်စာသို့မဟုတ်ကဒ်ပေးသူမည်သူမဆိုကိုအံ့အားသင့်စေမည့်ထူးခြား။ မယုံနိုင်စရာနှင့်မူလနှုတ်ခွန်းဆက်မှုကိုဖန်တီးပါ။
ခရစ်စမတ်စာရွက် - ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသောခွက်ဖလားသုံးခု၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတစ်ခွက်၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်လီတာ။ အားလုံးအတူတကွနှိုးဆော်နှင့်မီးဖို၌ထားလေ၏။ ရယ်မောခြင်း၊ အလင်းရောင်နှင့်သီချင်းများဖြင့်ဖွင့်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ချစ်ကြည်ရေးနှင့်အတူဝတ်ပြုကြလော့။ ပျော်ရွှင်သောခရစ္စမတ်ဖြစ်ပါစေ!
သငျသညျအကြှနျုပျကိုအစဉ်အမြဲငါလိုအပ်ထက်ပိုပြီးပေး။ ငါပေးသောအရာကိုမလုံလောက်ဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကိုလက်ထဲမှာကိုင်ထားလျှင်မင်းအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ မျှော်လင့်ချက်၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင့်ကိုစိုစွတ်စေပြီးသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူအားလုံးကိုဖြန်းပါစေ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များ။
တစ်ခါတလေတစ်ယောက်ယောက်ကမင်းဘ ၀ ထဲကို ၀ င်လာပြီးသူတို့အဲဒီမှာနေဖို့မွေးဖွားလာတာကိုသင်ချက်ချင်းသိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီခရစ်စမတ်လေးကိုငါအရမ်းသတိရတယ်
«ဒီနှစ်မှာမင်းပျော်ရွှင်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ချစ်ခြင်းနဲ့ငွေကိုတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ရှာမရသောအရာကိုဂူဂဲလ်တွင်ရှာဖွေပါ»
အကယ်၍ ဘဝကသင့်အားအကြောင်းပြချက်တစ်ထောင်ပေးလျှင်၎င်းကိုလျစ်လျူရှုပြီးပြုံးပါ။ သင့်အားပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ်စမတ်တစ်ခုသင့်အတွက်အကြောင်းပြချက် ၁ သန်းရှိသည်ကြောင့်သင်၏ဘဝကိုအိပ်မက်နှင့်အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။
မင်းဟာအေးဆေးငြိမ်သက်ပြီးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့၊ သင့်ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သူများစွာရှိတယ်။ သင့်ဘဝ၌များစွာသောအောင်မြင်မှုများ!
သူတို့ကပြောတာကဘ ၀ မှာအကောင်းဆုံးအရာတွေကဘယ်တော့မှတစ်ယောက်မှမလာကြဘူး၊ ဒီခရစ်စမတ်ကိုငါအတည်ပြုလိုက်တာပါ။ ပျော်ရွှင်သောခရစ္စမတ်ဖြစ်ပါစေ!
ဒီနှစ်မှာတော့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရစ္စမတ်ပွဲကိုလိုချင်သည်။ 'အကျပ်အတည်း - ပို' မရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်တဖန် 'ပျော်ရွှင်' ကြလိမ့်မည်။ ပျော်ရွှင်သောခရစ္စမတ်ဖြစ်ပါစေ!
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာသင်လိုချင်တာကိုလုပ်ပြီးသင်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်တာပါ။ မင်းရဲ့ဘ ၀ ကိုအိပ်မက်မမက်ပါနဲ့။ ပျော်ရွှင်သောခရစ္စမတ်ဖြစ်ပါစေ!
ဒီခရစ္စမတ်ပွဲကမင်းရဲ့အပြုံး၊ မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှု၊ မင်းတို့နဲ့မင်းရဲ့အချိန်ကောင်းကိုလိုချင်တယ်။ ပျော်ရွှင်သောခရစ္စမတ်ဖြစ်ပါစေ။
ခရစ္စမတ်သည်မိသားစုတစ်ခုအဖြစ်နေထိုင်သည်၊ အတူတကွသီဆိုပြီးလူတိုင်းနှင့်အတူကျင်းပကြသည်။ မင်းရဲ့အိမ်ကိုဒီပွဲကျင်းပဖို့လာမလား။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ်စမတ်အကြိုည
ကျွန်ုပ်မွေးဖွားလာသည်နှင့်အမျှဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ခြင်း (သိုမဟုတ်) မှတ်ဉာဏ်ကောင်းခြင်းတို့ကြောင့်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။
ခရစ်စမတ်အတွက် - ပျော်ရွှင်မှု၊ နှစ်သစ်ကူးအတွက် - ကြွယ်ဝမှုနှင့်ထာဝရ - ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေ။
ဒီအားလပ်ရက်ရာသီမှာမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဝတ်စုံ၊ မင်းရဲ့အပြုံးဟာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်ပါစေ။ အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်ပါစေ။
ဤအားလပ်ရက်များ၌သင်၌ရယ်မောရန်အကြောင်းရင်းပေါင်းတစ်ရာ၊ နေထိုင်ရန်အိပ်မက်တစ်ခု၊ ပျော်မွေ့ရန်ရွှင်လန်းမှုထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိပါစေ။ ပျော်ရွှင်သောခရစ္စမတ်ဖြစ်ပါစေ!
ပါပလောအီဂလီယာစ်ရှားအာဏာမ ၀ င်ခင်ဒီခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကိုသပိတ်မှောက်မယ့်နောက်ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ခရစ်စမတ်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့သင့်ကိုငါအလိုရှိ၏။
ငါကလေးဘဝတုန်းကခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာကအိပ်မက်မက်ဖို့နဲ့ငါ့ဆုလက်ဆောင်ကိုစောင့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်မှာငါအမြဲအိပ်မက်မက်ခဲ့တဲ့ငါ့ဆုလက်ဆောင် ... မင်းလား
"အယ်လ်ဇိုင်းမားအသင်းမှပျော်ရွှင်သောအီစတာနှင့် ၁၉၈၄ အတွက်အကောင်းဆုံးဆန္ဒများ"
«ဘက်သလီဟင်မြို့တော်ဝန်သည်ပေါ်တူဂီလိုအပ်ချက်များအတွက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အဆိုပါမာဂုပညာရှိပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ ကလေးသည်တအိမ်တည်း၌မွေးဖွားလိမ့်မည်။ စန်တာကလော့စ်သည်အစိုးရရှေ့နေအဖြစ်လျှောက်ထားသောကြောင့်ယခုနှစ်တွင်မည်သူ့ကိုမျှလက်ဆောင်များပေးပို့မည်မဟုတ်ပါ။ ပျော်ရွှင်သောခရစ္စမတ်ဖြစ်ပါစေ!"။
တစ်ခါတလေတစ်ယောက်ယောက်ကမင်းဘ ၀ ထဲကို ၀ င်လာပြီးသူတို့အဲဒီမှာနေဖို့မွေးဖွားလာတာကိုသင်ချက်ချင်းသိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီခရစ်စမတ်လေးကိုသင်တို့အရမ်းသတိရတယ်။ ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေပျော်ရွှင်ပါစေ။
ခရစ်စမတ်၏မှော်အတတ်သည်၎င်းသည်တစ်နှစ်တာကုန်လွန်သွားသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်လှန်ခဲ့သည့်အရာ၊ အနိုင်ရခဲ့သည့်အရာများနှင့်ရှေ့သို့တိုးတက်ရန်ခွန်အားကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်လူသား၏အကောင်းဆုံးခံစားချက်များကိုနိုးထစေပြီးထုတ်ဖော်ပြသခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်း၊ မိသားစုနှင့်ချစ်ခြင်း၏တန်ဖိုးအမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေသည်။
ဤအားလပ်ရက်များ၌အနီရောင် ၀ တ်ထားသောလူသည်သင်၏မီးဖိုထဲသို့ဆင်းလာပြီးသူသည်သင့်ကိုအိတ်ထဲထည့်လိုက်သည်ကိုမတွေ့ပါကကြောက်စရာမလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆုလက်ဆောင်မှာမင်း Santa Claus အားမေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီအချိန်မှာမင်းကိုရယ်စရာကောင်းတဲ့၊ မယုံနိုင်လောက်အောင် ... နူးညံ့တဲ့ ... sexy ... မွှေးပြီးအရမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့တစ်ခုခုကိုပို့ချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါမျက်နှာပြင်ကိုမဝင်ရဘူး ပျော်ရွှင်သောခရစ္စမတ်ဖြစ်ပါစေ!
စျေးကွက်ထဲတွင်ကြက်ဆင်၊ အာဟာရ၊ စပျစ်ရည်၊ စပျစ်သီးပျဉ်များကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ သို့သော်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုမရှိပါ၊ ၎င်းသည်အိမ်လုပ်စာရွက်ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်သောခရစ္စမတ်ဖြစ်ပါစေ!
အကယ်၍ သင်သည်လက်မှုပညာများကိုကျွမ်းကျင်လျှင်ခရစ်စမတ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသောရိုးရှင်းသော်လည်းလှပသောသစ်ပင်ကဲ့သို့သောကိုယ်ပိုင်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြင့်ခရစ်စမတ်ကိုဂုဏ်ပြုနိုင်သည်။ သင်သေချာပေါက်အောင်မြင်လိမ့်မည်
ဤခရစ်စမတ်ကတ်ပြားနမူနာများသည်သင်နှစ်သက်ရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ အခြားစာဖတ်သူများကိုအထောက်အကူပြုရန်သင့်တွင်အကြံဥာဏ်များရှိပါကမှတ်ချက်ပေးရန်မမေ့ပါနှင့်။ လာမည့်ခရစ်စမတ်ကိုသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုဝင်များသိစေရန်သင်၏လူမှုကွန်ယက်များတွင်မျှဝေပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » သင်၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အသိအကျွမ်းများအတွက်ခရစ်စမတ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားဥပမာ
ခံနိုင်ရည် - ဘာလဲ၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲ